Public profile kyawsein Home | 24 Naryee
စာရင်းသွင်းပြီးသူ	98 ဖော်ပြချက်များ
(Yangon (ရန်ကုန်))4ဓါတ်ပုံများ
(Yangon (ရန်ကုန်))3ဓါတ်ပုံများ
(Yangon (ရန်ကုန်)) 1 ဓါတ်ပုံ
Model	HoCo Z1 Weight (kg)	0.35 1. Input: DC12-24V 2. USB Output: 5V/2.1A, 11W, Double USB output 3. Material: ABS+PC flame resistent material 4. Maximum output of USB single port: 2.1A 5. Double-port intelligent balance flow dividing technology 6. Overcurrent and overvoltage multiple circuit protection 7. Unique appearance 8. Easy to plug 9. Additional shipping fees will be charged.
(Yangon (ရန်ကုန်))0ဓါတ်ပုံများ
- မိမိနေအိမ်မှာရောကားပေါ်မှာ အသုံးပြုနိုင်သည့် နို့ဗူးနွှေးစက် - * 1 year Warranty * ရှိပါသည် - မိမိလိုအပ်သလို mode ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း - ကားပေါ်တွင်သုံးရန် adapter ပလပ်ပါရှိခြင်း (ဆေးလိပ်မီးညှိသည့်နေရာတွင် ထည့်၍အသုံးပြုရသည်) - နို့ဗူးအရွယ်အစားမရွေးသုံးနိုင်ခြင်း - နို့ဗူးအပြင် ကလေးအစားအစာများကိုပါနွှေးနိုင်ခြင်း - PTC Heating Technology ကိုအသုံးပြုထားသဖြင့် စိတ်ချရခြင်း - အပူချိန်ကို တိကျစွာချိန်ညှိပေးပြီး ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း - ရေထည့်သုံး၍ရသလို ရေမပါပဲလည်းအသုံးပြုနိုင်ခြင်း - သယ်ဆောင်ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူသဖြင့် ခရီးသွားလျှင်လည်းသင့်တော်ခြင်း - လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ချွေတာပေးခြင်း - အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း
- ကလေးငယ်၏ နှာခေါင်းအတွင်းရှိ နှပ်အချွဲများအား အဖြူရောင် bulb ကို လက်ဖြင့်ညစ်လိုက်ရုံဖြင့် လွယ်ကူစွာ စုပ်ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း - နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသော ဆီလီကွန်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း - ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရ လွယ်ကူခြင်း မေမေတိုင်း ကလေးငယ်၏ ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံးအဖော်မွန် နှာခေါင်းအတွင်းရှိ နှပ်အချွဲများအား မရှိမဖြစ် အသုံးဝင်မှု၊ အဖြူရောင် bulb ကို လက်ဖြင့်ညစ်လိုက်ရုံဖြင့် အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာစုပ်ထုတ်ပေးနိုင်လို့ မိခင်များရဲ့အသည်းစွဲ Little-Bean-Nasal-Aspirator ပစ္စည်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်တိုင်း ကလေးငယ်များ၏ ကျန်းမားရေးအတွက် နူးညံချောမွေ့ ပျော့ပျောင်းသော ဆီလီကွန်အသားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ကိုယ်တွယ်အသုံဲးပြုရာတွင် လွယ်ကူစေ ပါသည်။ ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင် ၂၄နာရီတွင် စိတ်ကြိုက်လွယ်ကူစွာ မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုနဲ့ အသေးစိတ်သိရှိလိုလျှင် ဖုန်းလေးဆက်ပြီး စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်… Ph : 09456315509 http://www.24naryee.com/
•	ကြိတ်သားအကျစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ •	အလျား430 mm, အနံ 510 mm, အမြင့် 685 mm ရှိခြင်း။ •	အထူ 15 mm ရှိခြင်း။ •	ဘီးတပ်ထားသောကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းရ လွယ်ကူခြင်း။ •	အိမ်အရောက်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်ခပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
•	အလျား 1200 mm အနံ 675 mm အမြင့် 750 mm ရှိခြင်း/ •	ကြိတ်ပေါင်းသားဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ •	A4 size ဝင်ဆံ့သော အံဆွဲ သုံးဆင့်ပါရှိခြင်း။ •	အံဆွဲတွင် သော့ပါရှိခြင်း။ •	အံဆွဲလိုင်းများက အံဝင်ကောင်းမွန်ခြင်း။
(Yangon (ရန်ကုန်))2ဓါတ်ပုံများ
•	တီဗီတင်ရန် ခုန်ြ်ဖစ်ခြင်း၊ •	အခွေနှင့် စက်ထည့်ရန် အဆင့်ပါရှိခြင်း။ •	ပုံဆန်းရိုးရှင်း၍ လှပခိုင်ခံခြင်း။ •	ကြိတ်ပေါင်းသား ဆေးသွင်းထားခြင်း။ •	အလျား 1200 mm အနံ 550 mm အမြင့် 450 mm ရှိခြင်း။ •	ကျွန်းဖြူနှင့် မဟော်ဂနီဟူ၍ အရောင်ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း။
•	သံချေးမတက်သော စတီးဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ •	ဆိုဖာအခင်းပါသောကြောင့် သက်သောင့်သက်သာရှိခြင်း။ •	ဒီဇိုင်းပုံစံသေသပ်လှပခြင်း •	စတီး ပိုက်လုံးအကျယ် 20 mm နှင့် အထူ 1.0mm ရှိခြင်း။ •	460 mm အမြင့်ရှိခြင်း။ •	ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင် ၂၄နာရီတွင် စိတ်ကြိုက်လွယ်ကူစွာ မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုနဲ့ အသေးစိတ်သိရှိလိုလျှင် ဖုန်းလေးဆက်ပြီး စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်… Ph : 09456315509
Email address: kyawsein77@gmail.com
တည်နေရာ။: Insein (အင်းစိန်), Yangon (ရန်ကုန်), Myanmar